देवताहरूका भूमिकाहरू - गोठालाहरू गोठालो बन्छन्
देवताहरूका लागि विभिन्न परम्पराहरू छन्
इच्छित गोठाला संग स्पष्ट स्पष्ट नेतृत्व को लागी महत्त्वपूर्ण हुनेछ
जब बच्चा बप्तिस्मा लिनु भएको छ, यो गोठाला पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण छ। यो सामान्यतया आमाबाबुको नजिक हुने व्यक्ति हो। तर कुन आशाहरू वा समेत दायित्वहरू, के देवताहरूका कामहरू र कार्यहरू जोडिएका छन्?
हामी गोठालोहरू बन्न सक्छौं!
हामी गोठालोहरू बन्छौं!
एक गोठालाले बच्चालाई एक धार्मिक दृष्टिकोणबाट बप्तिस्मालाई साथ दिए, जिम्मेवारी मान्नु भनेको बच्चाले विश्वास सिक्छ र जीवन बिताउन सिक्छ।
वर्ष 1983 सम्म, चर्च मा प्रायोजन एक आध्यात्मिक सम्बन्ध को प्रतिनिधित्व गर्दछ। Godfather लैटिन देखि आउछ र यसको अर्थ "पिता संग" जस्तै छ।
कैथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट चर्चमा, एक प्रायोजनका लागि सर्तहरू फरक छन्।
यो निष्पक्ष को सह-डिजाइन हुन सक्छ, बप्तिस्माल मोमबत्ती को डिजाइन, एक उपहार को रूप मा एक बच्चाहरु को बाइबिल या व्यक्तिगत इच्छा वा जीवन को लागि एक वादा, जो लेखन मा रेकर्ड गरिएको छ। केही क्षेत्रहरूमा बच्चाहरु को लागि पाम आइतबार आफ्नो गोठाला एक खजूरको रूख ल्याउन को लागि अनुकूल छ कि खूब सुन्दर सजावट र चर्च मा आशिष् छ। बप्तिस्मा दिन प्रत्येक वर्ष बप्तिस्मा र प्रतिज्ञा सम्झन को लागी एक कारण हुन सक्छ।
आज, तथापि, godparents को पूरी धार्मिक संगति आंशिक रूप देखि पृष्ठभूमि मा स्थानांतरित गरेको छ
एक प्रायोजक को बच्चा को व्यक्तिगत विकास संग र शिक्षा को मामला मा अभिभावक को सहयोग को लागि इच्छित छ। प्रायः एक प्रायोजन प्रायः अवसरहरूमा उपहार दिन सीमित छ।
Godparents को देवता संग व्यक्तिगत सम्बन्ध निर्माण गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस र आमा पिता को बीच मा सल्लाहकार या मध्यस्थ को रूप मा रहें। अतीतमा, देवताहरूका आमाबाबुले आमाबाबुको मृत्युको हेरचाहको कर्तव्य गरेका थिए। यद्यपि, एक प्रायोजन संरक्षकता संग सम्बन्धित छैन। यदि आमाबाबुलाई मनपर्छ भने, यो इच्छामा निर्धारण गर्न सकिन्छ।
Godparents को अपेक्षाहरु, इच्छाहरु र दायित्वहरु के हो? यसले दुबै पक्षमा निराशालाई बचाउँछ। सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा, विश्वासको सम्बन्ध बच्चा र पिटत्यो वर्षको लागि अन्त्य गर्न सक्छ। संयोग, आमाबाबु आफैलाई ईश्वरीय स्वरुप बन्न सक्दैन, तर हजुरबुबा। साथै बहिनीहरू वा धेरै असल साथीहरू खुसीसाथ चुनेका छन्। मूल्य र शिक्षाको सन्दर्भमा तपाईं एकअर्कामा निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
फिर्ता समस्याहरू हटाउनुहोस्
संचारको लागि विदेशी भाषाहरू